DAAWO SAWIRO:- Wararkii ugu dambeeyay afgambigii dhicisoobay ee dalka Turkiga – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DAAWO SAWIRO:- Wararkii ugu dambeeyay afgambigii dhicisoobay ee dalka Turkiga
Wararkii ugu dambeeyay ee dalka Turkiga ayaa sheegaya inuu fashilmay isku daygii afgambi oo ay xalay isku dayeen inay sameeyaan koox ka tirsan ciidamada militeriga Turkiga, iyadoo madaxweyne Erdogan uu shacabka dalkiisa ugu baaqay inay ka banaan-baxaan waxa uu ugu yeeray taariikh ay horay uga soo gudubtay Turkiga.
Madaxweyne Erdogan ayaa ka soo muuqday teleefishin gaar loo leeyahay isaga oo ay ku hareereysan yihiin taageerayaal badan kuna sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Wuxuu madaxweyne Erdogan ku hanjabay kuwa isku dayay inay sameeyaan afgambiga fashilmay ee dalkiisa ka dhacay inay wajahi doonaan ciqaab adag oo dowladda ay kala kulmaan, isagoona sidoo kale sheegay in hadda loo baahan yahay “Nadiifinta ciidanka qalabka sida ee dalkaasi”.
Ciidamada dowladda Turkiga ayaa magaalada Ankara ee dalka Turkiga ku dhex wareejinaya saraakiil iyo askar ka mid ahaa kuwii soo qaaday weerarka inqilaabka dhicisoobay.
Saraakiisha iyo ciidamada militeriga ee loo adeegsanaayay afgambiga ayaa si hoose ula shaqeyn jiray kooxaha kasoo horjeeda nidaamka ka shaqeeya dalka Turkiga ee goobaha qaar weerarada ka geysta.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaaraha dalka Turkiga Binali Yıldırım ayaa goor dhoweyd ku dhawaaqay in la magacaabay taliye KMG ah oo ciidamada Turkiga yeelan doono kadib isku daygii afgembi ee dhicisoobay.
Taliyaha cusub ayaa lagu magacaabaa Umit Dundar, waxayna magacaabista taliyahaan cusub ay ka dambeysay kadib markii taliyihii hore xaaladiisa ay mugdi gashay.
Sidoo kale, wakaalada wararka Turkiga ayaa shaacisay in la qabtay ciidamo gaaraya 754, waxaana xilalka laga qaaday 29 Korneyl iyo 5 Jeneraal.
Ra’iisul wasaaraha Turkiga Binali Yıldırım ayaa amar ugu bixiyay inay ciidamadu soo ridaan diyaradaha ay adeegsanayaan ciidamada wada inqilaabka.
Si kastaba oo ay ahaataba, shacabka dalka Turkiga ayaa muujiyay sida ay kaga xun yihiin afgambiga dhicisoobay ee dalka Turkiga lala damacsanaa, iyadoona Turkiga uu taariikh ku lahaa isku dayga afgambiga ee soo jireenka ahaa, sanadkii 1960 ayay aheyd markii u horeysay ee uu dhaco isku day afgambi.